हत्याको विरोधमा राजमार्ग अवरुद्ध- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
हत्याको विरोधमा राजमार्ग अवरुद्ध
पुस ९, २०७८ गणेश चौधरी
टीकापुर — कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका–९ का अर्जुन दासको हत्याको विरोधमा कैलालीको लम्कीमा शुक्रबार पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरिएको छ ।
दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न दबाब दिन राजमार्ग अवरुद्ध पारेको मृतक अर्जुनका आफन्तले बताएका छन् । अर्जुन दासको हत्याको विरुद्ध संघर्ष समितिका संयोजक ललित परियारले राजमार्ग साँझ ४ बजे सम्मका लागि अवरुद्ध गर्ने बताएका छन् ।
अपराधीलाई आजीवन कारावासको सजाय हुनुपर्ने, मृतक अर्जुन दासलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पीडितका बालबालिकालाई उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, अमरावती सामुदायिक बनमा १० कट्ठा जग्गा छुट्याइ अर्जुनको सालिक निर्माण गर्नुपर्ने, अमरावती सामुदायिक बनको नाम परिवर्तन गरी अर्जुन दास सामुदायिक बन राख्नुपर्ने लगायतका आफूहरुको माग रहेको परियारले बताए ।
प्रकाशित : पुस ९, २०७८ १४:२५
नर्भिकमा यूरोलोजी टिमको निशुल्क ओपीडी हुने, पत्थरीको शल्यक्रियामा छुट
काठमाडौँ — थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले पुस महिनाभर मिर्गौला, मुत्रनली र मुत्रथैली केन्द्रित निशुल्क ओपीडी सेवा संचालन गर्ने भएको छ । शनिबार बिहान १० बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म २ घण्टा नि:शुल्क ओपीडी संचालन हुनेछ । यही योजनाअनुसार शनिबार(भोलि) नर्भिकको यूरोलोजी टिमले नि:शुल्क ओपिडी संचालन गर्ने अस्पतालले जनाएको छ । नि:शुल्क ओपीडी सेवामा यूरो सर्जरी विशेषज्ञद्वय डा. सञ्जिवभक्त विष्ट र डा. सुनिल श्रेष्ठले सेवा दिनेछन् ।
मिर्गौला, मुत्रनली र मुत्रथैलीमा पत्थरी तथा अन्य समस्या भएकाहरुले ओपीडीमा सहभागी भई नि:शुल्क परामर्श सेवा लिन सक्नेछन् । नर्भिकले मिर्गौलाका पत्थरीका विभिन्न शल्यक्रिया विधिहरुमा पुस महिनाभर विशेष छुटको समेत घोषणा गरेको छ । नर्भिक अस्पतालमा सानो प्वाल बनाई मिर्गौलाको पत्थरी निकाल्ने प्रविधि मिनी पीसीएनएल तथा अल्ट्रा मिनी पीसीएनएल उपलब्ध छ । यस्तै, घाउ नगरी मुत्रनलीको पत्थरी लेजरले धूलो बनाउने विधि, घाउ नगरी मिर्गौलाको पत्थरीको उपचार गर्ने विधि तथा घाउ नगरी मुत्रथैलीको पत्थरी निकाल्ने प्रविधि समेत उपलब्ध छ ।
नि:शुल्क ओपीडीमा सहभागी हुने विरामीहरुले उल्लेखित विभिन्न विधिहरुबाट शल्यक्रिया गर्दा विशेष छुट पाउने अस्पतालले जनाएको छ । नर्भिक अस्पतालले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत विगत केही महिनादेखि प्रत्येक शनिबार नि:शुल्क ओपीडी सेवालाई संचालन गर्दै आएको छ । नि:शुल्क ओपीडी सेवामा सर्वसाधारणको आकर्षण रहेको छ । नि:शुल्क ओपीडी सेवा लिन चाहनेले नर्भिक अस्पतालको कल सेन्टरको नम्बर ५९७००३२ मा सम्पर्क गरेर आफ्नो नाम अग्रिम टिपाउन सक्ने सुविधा समेत उपलब्ध छ ।
प्रकाशित : पुस ९, २०७८ १४:१६